နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နှင့် TPS | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသတင်းအချက်အလက် - ဇန်နဝါရီ updated 2019
Niloofar Rahmani, ဟောင်းတဦးအာဖဂန်လေတပ်ကပ္ပတိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိခိုလှုံခွင့်ပေးအပ်ခဲ့Niloofar Rahmani, ဟောင်းများအာဖဂန်လေတပ်ကပ္ပတိန် U.S အတွက်ခိုလှုံခွင့်ပေးအပ်ခဲ့. Niloofar Rahmani အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးလေယာဉ်ပျံရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာတွင်အွန်လိုင်း။